‘रिपोर्टिङमा मात्र चित्त बुझाउन सकिन’ « Loktantrapost
‘रिपोर्टिङमा मात्र चित्त बुझाउन सकिन’
५ भाद्र २०७३, आईतवार ०९:३२
। पत्रकार तीर्थ सिग्देलले ‘जीवनको गति’ नामक कृति प्रकाशित गरेका छन् ।
दुई दशकयता झापाली पत्रकारिताको मूलधारमा क्रियाशील पत्रकार सिग्देलले पत्रकारिता यात्राको सिलसिलामा आफुले पढेका, देखेका र भोगेका महत्वपूर्ण घटनालाई कितावमा वर्णन गरेका छन् ।
‘मैले परिकल्पना गरेको, देखेको र लेखेको परिवेश झापा र त्यस वरपरको हो’, पत्रकारबाट साहित्यकारको रुपमा डेब्यु गरेका सिग्देलले लोकतन्त्र पोस्टसँग भने–‘अझ भनौँ २००७, २०२८, २०४६, २०६२ का विभिन्न परिवेश, आन्दोलनहरू, सङ्घर्षका कथा र मेरो अनुभव यो कितावका विषयवस्तु हुन् ।’
कृतिको प्रकाशन र वितरणको जिम्मेवारी झापाको मिडिया रिसर्च सेन्टरले लिएको छ । रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, समाचारपत्र, हिमाल खबरपत्रिका, मेची टाइम्स, रेडियो विराट लगायतका दर्जन जति सञ्चारमाध्यममा पत्रकारिता कौशल देखाइसकेका सिग्देलको यो पहिलो साहित्यिक कृति हो ।
२०२८ सालको झापा बिद्रोह र त्यसका नायकहरूको चिनारीले पुस्तकलाई बोकेको लेखकको दावी छ । उनले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसबाट जीवन र आफन्त गुमाएका परिवारका कथा–व्यथा समेत पुस्तकमा समावेश रहेको जानकारी दिएका छन् ।
‘एउटा पत्रकार भएपछि सिधा रिपोर्ट बनाउनु मात्र जिम्मेवारी हँुदैन’, साहित्यिक लयमा कृतिका बारेमा उनी भन्छन्–‘समाजमा यस्ता विषयहरू पनि छन्, जसलाई फगत एउटा हार्ड न्यूजमा मात्र चित्त बुझाउन सकिदैन, त्यसलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने किताबै लेख्न सकिन्छ, मैले त्यो गरेँ ।’
राजनीतिक आन्दोलनका महत्वपूर्ण घटनाक्रमलाई समेटेको कारण पुस्तक निकै गहन र पठनीय ऐतिहासिक दस्तावेज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगत एक वर्षदेखि पुस्तक लेख्न थालेको र त्यस क्रममा कयौँ विषयको खोजका लागि मिहेनत र अध्ययन गर्नु परेको सिग्देल बताउँछन् ।
‘मार्नु र मर्नु सामान्य खेल भयो द्वन्द्वकालमा, मर्ने पनि मारिए, मर्नु नपर्ने पनि मारिए’, कृतिकार सिग्देल लेखनीको अन्तरवस्तुका वारेमा थप बताउँछन्–‘अत्यन्त पीडादायी क्षण थियो त्यो समय, कसले दुःख पाएन त्यो बेलामा ? कति मान्छे बेपत्ता भए ? कति घरबारबिहीन भए ? आज कसलाई कुरा गर्ने फुर्सद छ उनीहरूको ? कसलाई सम्झने समय छ उनीहरूलाई ? मैले तिनै पहिचान हराएका मान्छेहरू र तिनै युद्धका सञ्चालकहरू जसले त्यो कालखण्डलाई आफ्नो बशमा राख्न खोजे, उनीहरूको चरित्रलाई उजागर गरेको छु ।’
युद्धमा जित्नेका इतिहास लेखिन्छ, गुणगान गाइन्छ । तर त्यही युद्धमा पिल्सिएका मान्छेहरूको सबैतिरबाट वेवास्ता हुने गरेको लेखक बताउँछन् । ‘जसले मुलुक बनाउने सपना देखे र जसले आफ्नै आँखाले मृत्युलाई देखे, उनीहरूको साँचो कथा मैले लेखेको हुँ’–उनको दावी छ ।
झापाले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी योगदान दिएको छ । सात सालको क्रान्तिताका पूर्वमा छुट्टै सामयिक जनसरकार नै गठन भएको थियो भने २०२८ सालको झापा विद्रोहले मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ मोड दियो । २०३६, २०४६ र २०६२ सालको आन्दोलनमा समेत झापाको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो ।
यो इतिहासलाई कथा र कवितामा मात्र होइन, उपन्यासमा पनि लेखिएका छन् । तर पत्रकारकै आँखाबाट चाहिँ तीर्थ सिग्देलले कसरी लेखेका होलान् ? यो कौतुहल मेट्न चाहिँ पुस्तक नपढी थाहा हुँदैन ।
सिग्देलले पुस्तकको छपाइ कार्य सकिएर बजारमा लैजाने तयारी भइरहेको जनाउँदै चाँडै विमोचन गरिने बताए ।